हिमाल खबरपत्रिका | 'यो नेतृत्वको संकट हो'
'यो नेतृत्वको संकट हो'
पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समितिका सभापति रहेका नीलाम्बर आचार्य संविधानवाद, लोकतन्त्र र यसका मूल्यमान्यतामा दक्खल राख्छन्। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा कानूनमन्त्री रहेका आचार्यले श्रीलंकामा नेपाली राजदूतका रुपमा समेत जिम्मेवारी वहन गरे। दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि मूलतः लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति उनको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। संविधान जारी भएपछि मुलुकले भोगिरहेको संकट, त्यसका कारण, संविधान कार्यान्वयन तथा समग्र राजनीतिका विषयमा हिमाल सँग उनले लामो कुराकानी गरे। कुराकानीको सारसंक्षेपः
तस्वीरहरुः किरण नेपाल
हिजो र आज पनि ठम्याउन नसकिएको कुरा के हो भने परिवर्तन भइसक्दा पनि परिवर्तनविरोधी शक्ति पराजित भइसकेका हुँदैनन्, पछि हटेका मात्र हुन्छन्। हाम्रो मुलुक सामन्तवादी अर्थ, सामाजिक, राजनीतिक संरचना र नकारात्मक शक्ति समाप्त पार्ने चरणबाट आएको हो। गणतन्त्रसम्म आइपुगेपछि हामी सामन्तवादी संस्कृति पराजित भयो भन्छौं, तर गाउँगाउँसम्म ठालूतन्त्र अझै विद्यमान छ। माओवादी 'जनयुद्ध' त्यही सामन्तवादी संस्कारलाई पुल्पुल्याएर चलेको हो। किन भने उसले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको नारा लगायो। जातिवादको नारा ठालुतन्त्रकै अर्को स्वरुप हो।
मधेश आन्दोलन सपाट छैन। तुरुन्तै परिवर्तन र प्रगति चाहने भन्ने आकांक्षा राम्रो छ। अर्कोतर्फ, हिजोदेखिको पकड गुम्ने भो भन्ने चिन्ता गर्नेहरू छन्। आन्दोलनको नेतृत्वमा पञ्चायतकालदेखि सत्तामा रहेकाहरूको सहभागिताबाट यो स्पष्ट हुन्छ। जो हिजो पटकपटक मन्त्री भए, आज उनीहरू नै भनिरहेका छन्, 'तिम्रो शासनले हामी पछि पर्‍यौं।' मधेशी जनताले पराजित गरेकाहरू नेतृत्वमा छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यहाँ छ। त्यही प्रवृत्तिले जायज माग खोसेको छ।
पृथ्वीनारायणको सामन्ती एकीकरणले सामन्तवादलाई नै ढाल्ने काम गर्‍यो। त्रिचन्द्र कलेज र दरबार स्कूलको कुरा गरौं। राणा शासकहरूले नै आफ्नो चिहान आफैं खने भनिन्थ्यो। त्यस्तै भयो। मार्क्सले पनि भनेका छन्– 'पूँजीवादले आफ्नो चिहान आफैं खन्छ।'
हामीले नेपाललाई समग्रतामा हेर्दा चिज के छ भनेर हेर्नुपर्‍यो। बहुसंख्यक के छ? केले प्रभाव पारेको छ? भनेर हेर्नुपर्‍यो। नेपालको संस्कृतिको मूल आधार के हो भन्ने हेर्नुपर्‍यो। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध यस्तो छ जसले गर्दा हामीले आफ्ना सम्पूर्ण कठिनाइ भारतमा निर्यात गरिदिन्छौं। बिरामी पर्‍यो, भारत जान्छौं। पढ्न पाएनौं भारत गइदिन्छौं। हाम्रो बेरोजगारी भारत निर्यात गरिदिन्छौं। हाम्रा कठिनाइहरू यहीं बसेर समाधान गरौं भनेर कहिल्यै लागेनौं। हामीले आफूलाई आफ्नो जीवन चलाउन सधैं भारतमा निर्भर रहने बनायौं। आफ्ना कठिनाइसँग देशभित्र जुधेर समाधान गर्ने जाँगर चलेन। यसले गर्दा भारतले एकातिर माया देखाए जस्तो गर्ने र अर्कोतर्फ हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्‍यो। र नेपालको राजनीतिमा निरन्तर हस्तक्षेप भइराख्यो। जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै बलियो हुन, हुर्कन पाएन।
शक्तिसंघर्षमा भारतलाई पनि 'इन्भल्भ' गर्ने, भारत पनि 'इन्भल्भ' हुने प्रक्रिया रहिराख्यो। अर्थतन्त्रमा पनि त्यही भो। जसले गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा राजनीति पनि आयो। जसले गर्दा कुनै नेतृत्व बलियो हुन पाएन। मैले त्रिकोण सम्बन्धको कुरा पनि गरें। माओवादीले राजालाई प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर पार्छु भने, राजासँग उनको मोह भएकाले होइन। राजाले ठाने– माओवादीले चलाए के बिग्रियो र! किन भने यी संसद्वादीले हाम्लाई पछार्‍या छन्, अधिकार खोसेर सेरेमोनियल राजा बनाउन खोज्या छन्। माओवादी बढून् न अगाडि भन्ने ठाने।
मुलुक त अगाडि बढ्छ, बढ्यो। अगाडि नबढेको भए यत्रो परिवर्तन हुँदैनथ्यो। पञ्चायतमा पासपोर्ट दिंदैनथ्यो। प्रेस चलाउन अनुमति थिएन। आज यत्रा मान्छे विदेशमा छन्। विश्वसँग नागरिक तहमा खुल्ला सम्बन्ध छ। हामीले शिक्षा, बालबालिका, महिला र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेका छौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै भनेको छ। संसारले नगरेको महिला प्रतिनिधित्व एकतिहाइ सुनिश्चित भो। सम्पत्तिको अधिकार भयो। त्यस्तै दलित भनेर गरिने भेदभाव दण्डित भो। अर्थतन्त्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन भयो।
हाम्रो रहनसहन, लवाइखवाइमा ठूलो भिन्नता आएको छ। सञ्चारमा अभूतपूर्व विकास भएको छ। मोबाइल प्रयोगकर्तादेखि प्रविधिको विकास, अखबार, एफएम, अनलाइन कति बढेका छन्। यी सबै अगाडि बढेका उदाहरण हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति बढ्न सकेका छैनौं। खै हामीले युवालाई सीप र रोजगारीको अवसर दिएको? स्तरीय शिक्षामा गरीबको पहुँच बढाएको खोइ? अगाडि बढेका छौं। केही विकृति पनि छ। ठूल्ठूला परिवर्तन गरे पनि त्यसपछि राम्ररी सम्हाल्न सकेका छैनौं, भगवान भरोसामै छोडेका छौं।
यो अलि फरक छ। महेन्द्र र वीरेन्द्रले त समय पाएका थिए नि। एकल नेतृत्वमा शासन चलाएका थिए। त्यसवेला अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि एकल नेतृत्वको थियो। शीतयुद्धको कारणले लोकतान्त्रिक शक्तिले बलियो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पाएका थिएनन्। दुई महाशक्तिमध्ये एकले एउटा तानाशाहलाई च्याप्थ्यो भने अर्कोले अर्कोलाई। त्यो वेला एकल नेतृत्व हुँदा पनि महेन्द्र र वीरेन्द्रले गर्न सकेनन्। बिल्कुलै गरेनन् भनेको होइन। भूमिसुधार राम्रै हो, कोदारी राजमार्गको निर्माण भयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो। तर जेजति हुनुपर्ने थियो भएन।
अर्को कुरा, केही पनि चमत्कारमा हुँदैन। एकैछिनमा हुँदैन। एक्लैले हुँदैन। तर शुरुआत गर्न, 'अर्गनाइज' गर्न, प्रेरणा दिन सक्छ। त्यसका लागि ठूलो शक्ति, सहयोग, क्षमता, सीप पनि चाहिन्छ। पुरानै मसिनरीबाट नयाँ उत्पादन हुँदैन। हामीले परिवर्तन गर्‍यौं, गणतन्त्र ल्यायौं, तर संस्था निर्माण गर्न सकेनौं। लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनुसारको आचरण बन्न सकेन। अहिले पनि ठालूतन्त्रकै प्रभाव देखिन्छ। हामीले स्वतन्त्र नागरिक चाहेनौं, अनुयायी र समर्थक खोज्यौं। स्वतन्त्र नागरिक होइन, पिछलग्गु सिर्जना गर्न खोज्यौं।
नेपाल बनाउन नेतृत्वले आचरण बदल्नुपर्‍यो। अरुलाई सक्षम बनाउनुपर्‍यो। जति सक्षम छ, त्यसलाई अझ सक्षम बनाऊँ, प्रोत्साहन दिउँ्क भन्ने हुनुपर्ने हो नि।
तपाईंले नेतृत्व नै निर्माण गर्नुभएन। जीवन सहज हुनलाई नागरिक त नागरिक हुनुपर्‍यो नि! तपाईं नेतृत्वबाट आशा गर्नुहुन्छ र त्यो नेतृत्वको पिछलग्गु बन्नुहुन्छ। नेतृत्वको आलोचना पनि गर्न सक्नुपर्‍यो। पिछलग्गु हैन, नागरिक चेतना विकसित हुनुपर्‍यो। मैले देशमा संकट देखेको छैन। देशले अप्ठ्यारो भोगेको छ, तर परिवर्तनलाई नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेको हो। यो नेतृत्वको संकट हो। किन हामीले स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउन सकेनौं? बहुमत ल्याएको पार्टीले पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन किन पाउँदैनन्? अर्थात् हामीले नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि गरिराखेका छौं। त्यसको दोष संविधानलाई दियौं। आचरणको दोष व्यवस्थालाई दियौं।
किन भने नेतृत्व निर्माण हुन सकेन। के यो जाडो आउँछ भन्ने थाहा थिएन? भूकम्प वैशाखमा आयो। अहिलेसम्म भूकम्पपीडितलाई जाडोबाट जोगिने व्यवस्था गर्न किन सकिएन? नेतृत्व भइदिएको भए यो पूरा देश मेरो हो भनेर सोच्ने थियो। उसले म प्रधानमन्त्री हुँ, मैले मेरो गुटलाई 'म्यानेज' गरे पुग्छ भन्ने सोच्यो। पार्टी पनि हैन, गुटको नेता भयो। पहिलेको र अहिलेको पनि सरकारले त्यही गर्‍यो। म नेपालको नेता हुँ भन्ने चेतना भयो भने उसले नेपालव्यापी रुपमा सोच्छ, काम गर्छ। काम गर्ने संयन्त्र बनाउँछ। नेता भइदिएको भए मधेशमा केही भयो भने मेरो जिम्मेवारी हो, पहाडमा केही भइदियो भने मैले सोच्ने हो भन्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण नेता नभएकाले हिजोका बाँकी रहेका समस्या नयाँ तरीकाले बल्झिएर आए।
दाउरा छैन, ग्याँस छैन। घरमा बिरामी छन्, महिला छन्। तिनलाई 'पख, पाइप लगाएर ग्याँस पुर्‍याइदिन्छु' भन्न हुन्छ? ५–१० वर्षपछि त्यो गर्न सकिएला, अहिले त तिनलाई अलिकति दाउरा पुर्‍याइदिऊँ। आधा सिलिन्डर ग्याँस उपलब्ध गराइदिऊँ। अहिले मान्छे मरिराख्या छ, अनि पछि नेपालभर डाक्टर छ्याप्छ्याप्ती पारिदिन्छु भनेर हुन्छ?
यो सरकारले भारतीय नाकाबन्दीले कष्ट रहेको हो भन्न पाउँछ, तर त्यो कष्ट सम्बोधन गर्न तिमीले के गर्‍यौ भनेर हामीले सोध्न पाउनुपर्छ। के अत्यावश्यकीय वस्तुको सार्वजनिक बिक्री वितरणको प्रयास गरियो? कालोबजारी चुलिएको छ, दशैं तिहारमा जस्तो सुपथ मूल्यको पसल खोलियो? नाकाबन्दीले औषधि नपुग्ने अवस्था हो भने जहाज आइरहेकै थिए, जहाजबाट भए पनि औषधि ल्याउनुपर्ने होइन? नाकाबन्दी भएपछि त झ्ान् बढी काम गर्नुपर्ने हो। नाकाबन्दीले केही काम गर्न सकेनौं भनेर गफ गरेर बस्ने अनुमति दिंदैन। झन् बढी मिहिनेत पो गर्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिएन। हामीलाई यस्तो गछौ, उस्तो गर्छौं भन्ने चाहिएको होइन, यस्तो काम शुरु गरिसक्यौं, यति काम भइसक्यो भन्ने नेतृत्व चाहिएको हो।
हामी जिम्मेवार भन्नुको अर्थ जसलाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको हो, उसलाई ढाकछोप गर्ने भन्ने भयो नि! पहलकदमी, अग्रसरता, नेतृत्व भन्ने कुरा सँगसँगै जोडिएर आउँछन्। यसको अर्थ नभनिकनै चेतना भएर, आफूलाई बोध भएर गर्ने हो। नेतृत्व त्यसैलाई भन्छन्। मलाई अहिले ग्याँस चाहिएको छ। यो नाकाबन्दीमा कसरी ल्याउने, म जान्दिनँ। मैले खाना पाउनुपर्‍यो। कहाँबाट ल्याउने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त त्यो ठाउँमा पुगेकाको जिम्मेवारी हो। कति सम्भावना छन्, समस्या कति छन् भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा पुगेकोले सोच्नुपर्‍यो। जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा नगर्नुको दोष त्यहाँ बसेकाले लिनुपर्छ। हिजोको सरकारले पनि गरेको थिएन भनेर उम्कन मिल्दैन।
तपाईंलाई के काम गर्नुछ प्रष्ट हुनुपर्‍यो। मलाई जानु छ भने भन्नुपर्‍यो, कहाँ जानुछ, कुन दिशामा जानुछ? स्थानीय चुनाव गर्नुछ भने यति समयमा चुनाव गर्छु भन्नुपर्‍यो। त्यसमा कति प्रगति भएको छ भनेर जनतासमक्ष रिपोर्टिङ गर्नुपर्‍यो। भूकम्पपीडितलाई पहिलो प्राथमिकता भनेको भाषण सुनिन्छ। के भन्या पहिलो प्राथमिकता भनेर? अरु केही आपूर्ति गर्नु छैन? नाकाबन्दी खोल्नु छैन? नाकाबन्दी नखुलेसम्म त भूकम्पपीडितसमक्ष पनि कसरी पुग्नुहुन्छ? भूकम्पपीडितलाई यो गर्छु, यो शुरु गरिसकें भन्नुपर्‍यो नि!
अर्को, यो हिजोको सरकार होइन। अर्थात् ४० बाट २० मा झ्ार्नुपर्‍यो। मितव्ययी हुनुपर्‍यो। सकिने जति सम्पूर्ण सरकारी खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्‍यो। भोजभतेर गर्न, ठूल्ठूला 'डेलिगेसन' जान र मन्त्रालय फुटाउन भएन। देशमा अप्ठ्यारो हुँदा जथाभावी खर्च गर्नुहुन्छ? नयाँ संविधान आएपछि आचरण पनि नयाँ हुनुपर्‍यो। सरकारको आचरण बदल्नुपर्‍यो। पार्टीहरूको र नेताहरूको आचरण बदल्नुपर्‍यो। जबसम्म मुलुकमा कर्म संस्कृति हुँदैन, देश अगाडि बढ्दैन। पहिले सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्‍यो। गफबाट होइन कामबाट आशा दिनुपर्छ, सरकारले।
हामीले कहाँकहाँ सम्भव छ बाटा खोल्दै जानुपर्‍यो। भारतसँगको विकल्पको रुपमा होइन, संसारमा जहाँजहाँ सम्बन्ध फैलाउन सक्छौं फैलाउनु पर्‍यो। चीनसँगको सम्भावना उहीसँग गर्ने हो भारतसँग त अझ व्यापक सम्भावना छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्‍यो। देशमा विज्ञहरु तयार गर्नुपर्‍यो। विना विज्ञको, विना दक्ष जनशक्तिको काम हुँदैन। दक्ष जनशक्ति बढाउँदै जानुपर्‍यो। आफन्तलाई होइन दक्षलाई अवसर दिनुपर्‍यो। अवसर, सम्भावना पर्याप्त छन्। काम शुरु गर्‍यौं भने ती सम्भावना ह्वात्तै बढेर आउँछन्। एकैदिनमा त चमत्कार हुँदैन। अब त देश बन्छ भन्ने देखाउनलाई एक महीना पर्याप्त छ। यो सरकार बनेको त तीन महीना भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षमा हुँदा जस्तो भाषण गरेर हुँदैन।